जुम्लामा सत्ता साझेदारहरुको गठबन्धन टुट्यो, माओवादी, कांग्रेस र समाजवादी एक्ला एक्लै लड्ने — Breaking News, Headlines & Multimedia
जुम्लामा सत्ता साझेदारहरुको गठबन्धन टुट्यो, माओवादी, कांग्रेस र समाजवादी एक्ला एक्लै लड्ने
सम्भावित विश्लेषण सहित
नेत्र शाही बैशाख ११, २०७९ सुर्खेत
११ वैशाख २०७९ आईतवार,
कर्णालीमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच आठ जिल्लामा भागबण्डा मिलेपनि जुम्लामा भने गठबन्धन टुटेको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच गठबन्धन गरेर जाने केन्द्र तथा प्रदेशको निर्देशन भएपनि जुम्लामा गठबन्धन टुटाइएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीचको प्रदेश समितिले गठबन्धन गरेर जाने सहमतिका साथ दिएको निर्देशन तोडिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) जुम्लाका संयोजक बीरबहादुर कुँवरले कर्णाली प्रदेशस्तरमा भएको पाँच दलीय गठबन्धनको निर्णय आफूले स्वीकार गरेको बताउनुभयो । “हामीले उक्त निर्णयको स्वागत गरेका थियौं,” संयोजक कुँवरले भन्नुभयो, “तर काँग्रेस र समाजवादीले त्यो निर्णय उल्ट्याएका छन् ।”
अब माओवादीले आफ्नो तरिकाले लड्ने उहाँले बताउनुभयो । यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जुम्ला अध्यक्ष तीर्थबहादुर बुढाले यस अघि नै समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिएको हुँदा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको कोरपाटीलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “गठबन्धन ती दुई पाटीबीचको हो । हामीले पहिले कुरा नमिलेपछि त्यहाँबाट बाहिरिएका हौं ।”
कांग्रेस पनि एक्लै लड्छ : सभापति कर्णबहादुर शाही
यता नेपाली काग्रेसका सभापति कर्णबहादुर शाहीले गठवन्धन टुटेपछि नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै भिड्ने भएको कोरपाटीलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले समाजवादी सँग साझेदार गरेर लड्ने अलि पहिलाको कुरा हो तर अहिले एक्ले लड्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
जुम्लामा अव के होला ?
सत्ता गठवन्धनको तालमेल नभएपछि जुम्लामा अव के होला ? जुम्ला गठवन्धनको निश्कर्षविहिन वैठकले राजनितिमा नयाँ ट्वीष्ट तथा तरंग छाएको छ । आईतवार जुम्लामा बसेको शिर्ष नेताको वैठकले प्रदेशबाट पठाईएको भागवण्डा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अव के हुन सक्छ ।
सम्भावना १ : एक्लै भिड्ने
जुम्लामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी एक्ला एक्ले लडेमा माओवादी कांग्रेसको अघिल्लै नतिजा प्रदान गर्न सक्छ । माओवादीले २०७४ को निर्वाचनमा ३ प्रमुख, पाँच उपप्रमुख र २५ वडामा जीत हाशिल गरेको छ । कांग्रेसले चार प्रमुख, तिन उपप्रमुख र १६ वडा जितेको थियो ।
तर समाजवादीकोे जिल्लाको गोठिचौर र हिमा गाउँपालिकामा पकट राम्रो भएको बताउदै आएको छ, किनकी हिजो गुठीचौरका ३ वडामा जीत र हिमामा एमाले हुदा ३ मतले गाउँपालिका अध्यक्ष उपविजेता भएको हो । यसैले एक्ला एक्लै लड्ने हिक्मत हुन सक्छ ।
सम्भावना २ : दुईविच साझेदार
सुरक्षित हुन दुईवचिको गववन्धन पनि हुन सक्छ । एक पटक कांग्रेस र समावादी विचको गठवन्धन भयो भन्ने स्रोतको भनाई छ । तर अहिले नभएको दुइवैदलले कोरपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । यद्यपी कांग्रेस र समाजवादी विचमा गठवन्धन भएर निर्वाचनमा गएमा जुम्लामा माओवादी र एमाले मिल्ने ढोका पनि खुला हुन सक्छ । जिल्लाभर हेर्दा नेकपा एमालले आफ्नो मत बढाईरहेको दावी गरिरहेको छ ।
कांग्रेसलाई र माओवादीलाई कति घाटा ?
गठवन्धनबाट बाहिरिएपछि राजनितिक पासा कता भन्ने थाहा छैन् । तर सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बढि घाटा हुनसक्ने र माओवादीलाई दोस्रो घाटा हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेस माओवादी वाहेक कुनै दलसँग सहकार्य गरेमा उसलाई घाटा लाग्न सक्छ तर समाजवादी र नेकपा एमाले फाईदा हुन सक्छ । किनकी अस्थिर राजनितिमा एमाले सँग माओवादी मिल्ने सम्भावना भयो भने माओवादी र कांग्रेसको हैसियत दुई दुई पालिकामा झर्नपनि सक्छ । वाँकी विश्लेषण गर्दै जाउला । किनकी यस अघि चन्दननाथ नगरपालिमामा पूर्व एमाले नगरप्रमुखको मतदानमा दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमा आएकाे थियाे ।